Tun Tun's Photo Diary: Funny Ads in Myanmar
ဒါလေးက တော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြေငြာ တဲ့ ပိုင်ရှင် တော့ ပိုက်ဆံတော်တော် ကုန်လောက်ပြီ။ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ၃ ရက်လုံး ဇာတ်တိုက်ဆိုသလို ကြေငြာထားတာ။
ဒါဆိုင်းဘုတ်က တော့ တောင်ကြီးကပါ။ ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်နေနဲ. လာရောက်လျောက်ထားသော အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကို လခ ၂၀% တိုး/လျှော့ ပေးမည်တဲ့။ သွားလျှောက်ကြပါလား။ ကျွန်တော့် ရိုက်လာတာ ရှေ့ ၂ ပတ်လောက်ကပဲ ရှိသေးတယ်။ အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကို နားလည်ပါတယ်။ ၁ ချက်ခုတ် ၂ ချက်ပျက်အောင် ရေးထားလို. သဘောကျမိတာပါ။
Contact us လို.ပဲ မြင်ဖူး ကြားဖူးပါတယ်။ Contact up ဆိုတော့ တမျိုးကြီးပဲ။ အိမ်ပေါ်တက်လာပြီး ဆက်သွယ်ပါလု.ိ ပြောတာ ထင်တယ်။ ကျွန်တော့် မသိသေးတဲ့ အီဒီယမ် လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။
သူ.ဖာသာ နေနေတာ မှ အကောင်းသား။ ဒီဆိုင်းဘုတ်မြင်လိုက်မှ ကျောချမ်းလာတယ်။
ဒီထက် ၇ယ်ရတဲ့ ဟာတွေ ရှိသေး တယ်။ ကိုယ်က ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တာ တွေ.ရင် အရမ်းပေါ်တင်ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုးလို.။ အခုထိမှတ်မိနေသေးတာက မန္တလေး က ဘိလိယက် စနူကာဆိုင်ရှေ့မှာ မြေဖြူနဲ. ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် အမျိုးသွီိား (၂) ဦးအလိုရှိသည် ဆိုတဲ့ဟာပါ။ အထီးလို တာလား အမလိုလို. အတိုချုံးလိုက်တာ ထင်တယ်။ ဘယ်လောက်ပိုင်သလဲ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက မြင်ခဲ့ တဲ့ အထူးအဆန်းလေး တွေ ဖုန်းနဲ. ရိုက်ထားတာ လေးတွေ ပြန် Share လိုက်တာပါ။
at 8/23/2011 06:12:00 AM
December Mgmg August 23, 2011 at 6:52 AM
မိုက်တယ် အကိုရေ ။ ဦးဦးဖျားဖျား လာဖတ်ပြီး ။ ဦးဦးဖျားဖျား Comment သွားတယ်ဗျာ :D
Anonymous August 23, 2011 at 9:14 AM
T T Sweet August 23, 2011 at 5:07 PM
Funny, I do mistake in English spelling too. We have to take care of it.
Tun Tun August 23, 2011 at 5:21 PM
Yes. I didalot of grammer and spelling mistake my blog posts as well. This is just funny. ;)
Anonymous August 24, 2011 at 4:19 AM
Funny, I do mistake in English spelling too. We have to BE care of it.
han August 24, 2011 at 4:30 AM
Mite tal bya. Yee ya tal...
သက်ဝေ August 24, 2011 at 5:03 AM
restourant စာလုံးပေါင်းမှားလို့ ရယ်တယ်ဆိုရင် "၁ချက်ခုတ် ၂ ချက်ပျက်" ကိုရော မရယ်ချင်ဘူးလားဗျ.. Moreover, it is spelled Grammar, not Grammer.
Han Kyi August 24, 2011 at 10:42 AM
အခုမှပဲ ရောက်ဖူးတယ်...အလွဲလေးတွေက ရယ်ချင်စရာ...အပြင်ထွက်တိုင်း အဲဒီလိုအလွဲလေးတွေတွေ့နေကျ...ဟာသအမြင်တော့မမြင်ဖြစ်ဘဲ ဒေါကန်လာမိလွန်းလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေဖြစ်တယ်...အခုပို့စ်မှာကျတော့ ဟာသဆန်ဆန်လေး တင်ပြထားတော့ ဒေါမပွဖြစ်တော့ဘဲ ရယ်မိသွားတယ်...ကျေးဇူး..